ugu wanaagsan iPhone Photo Transfer si ay u gudbiyaan iPhone Photos
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan iPhone Photos
"Qof kasta oo iPhone qalab kala iibsiga sawir in ay ku taliyaan? Waxaan jeclaan isticmaalaya iPhone sida kamarad si sawirro loo qaado meel kasta wakhti kasta. Run ahaantii waxaan u baahan app ah kala iibsiga iPhone sawir xirfadeed si ay u caawiyaan ii photos wareejiyo dhexeeya iPhone iyo computer. Sarbeebta? Thanks!"
Wixii iPhone users kuwaas oo u baahan in ay waqti ka wareejiyo photos iPhone in mar, waa mid aad u lagama maarmaan ah in ay suuqa kala iibsiga ka iPhone sawir xirfadle, sababtoo ah Lugood aan sawiro ka iPhone bedeli karaa computer. laftiisa iPhone ma jecli waa ku disk adag saari karo oo aan aad karaa si toos ah u gudbiyaan sawiro iPhone ama ka. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay in la raadiyo ah iPhone kala iibsiga sawir aalad internet ka. Si loo badbaadiyo waqtiga aad, halkan waxaan jeclaan lahaa in aad ku talin Wondershare TunesGo Retro , qalab xirfadle ee loogu talagalay iPhone.
Isku day inaad ka iPhone Photo Transfer ugu fiican hadda!
Fiiro Gaar ah: Kala TunesGo Retro (Windows) & TunesGo Retro (Mac) ayaa laga heli karaa. Waxaad isku dayi kartaa iyaga si xor ah aad Windows PC ama Mac.
Maxaad Wondershare karaa TunesGo Retro samayn?
Wondershare TunesGo Retro (Windows) iyo Wondershare TunesGo Retro (Mac) ha kuu soo gudbin sawiro iPhone, labadaba Photo Library iyo Roll Camera, in computer u gurmad. Iyo haddii aad u baahan tahay, waxa kale oo aad dajiyaan karaa sawiro ka computer si iPhone si deg deg ah. Intaa waxaa dheer, waxa aad ku xoojiya sidii ay tirtirto photos aan la rabin on iPhone.
Sida loo isticmaalo iPhone Photo Transfer si ay u gudbiyaan sawiro iPhone
In tutorial, waxa aanu qaadan sida loo isticmaalo Wondershare TunesGo Retro (Windows) sida tusaale si ay u gudbiyaan sawiro iPhone. Haddii aad tahay qof user Mac ah, isku day in version Mac ah. Tallaabooyinka ku dhowaad isku mid yihiin.
Isticmaal iPhone USB cable in ay ku xidhmaan iPhone la PC. Daah-Transfer iPhone Photo oo u aqoonsadaan doonaa iPhone oo tus in uu furmo suuqa hoose. Qalab iPhone Tani waa si buuxda u la jaan qaada Windows 8, Windows 7, Windows XP, iyo Windows Vista. Hoos waxaa ku qoran si dhekhso ah u iPhone Photo uu furmo suuqa hoose Transfer.
Tallaabada 2. Transfer iPhone Photos
Guji "Sawirro" dhinaca bidix ee suuqa hoose, waxaad ka arki kartaa iPhone Camera Roll, albums Photo Library iyo Photo halkan ku qoran. Waxaad riix kartaa shay kasta si aad u aragto sawiro iyo dhoofin in computer ama guji Photo Library ama albums Photo inay dajiyaan sawirada kombiyuutar.
Bedelka Photos ka iPhone Photo Library in computer .
Bedelka Photos ka iPhone Camera Roll in computer .
Bedelka sawiro ka computer si iPhone Photo Library .
Isku day iPhone Photo Transfer hadda!
Daawo Video ah in ay bartaan sida ay u gudbiyaan iPhone Photos
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPad in Laptop
Tababare Best iPhone Photo loo maareeyo iPhone Photos